Madaxweynaha Turkiga oo goor dhow soo gaari doona Muqdisho | Baydhabo Online
Wafdi uu horkacayo madaxweynaha Turkiga Rajab Dayyib Erdogan ayaa lagu wadaa in ay saacadaha soo socda soo gaaraan magaalada Muqdisho, iyadoo madaxda dowladda Soomaaliya ay isu diyaarinayaan sidii ay u soo dhaweyn lahaayeen madaxweynaha dalka Turkiga.
Ammaanka caasimadda Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo ciidamadu ay xireen dhamaan waddooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho, si looga hortago falal argagixiso oo ka dhaca magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Turkiga ayaa la qorsheeynayaa in uu la kulmo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo dhinaca kale la rajeynayo in uu xarigga ka jaro safaarad casri ah oo dowladda Turkigu ka hirgelisay magaalada Muqdisho.
Danjiraha Soomaaliya ee Turkiga Cabdulaahi Maxamed Cali “Sanbaloolshe” ayaa sheegay in madaxweynayaasha labada dal ay kala saxiixan doonaan heshiisyo iskaashi ah, wuxuuna intaasi ku daray in madaxweynaha Turkiga uu dhagax dhigi doono dhismaha mashaariic cusub halka uu xarigga ka jaridoono safaaradda ugu weyn ee turkigu ku leeyahay caalamka.
Waa booqashadii Sadexaad ee Erdugan ku yimaado Muqdisho tan iyo sanadkii 2011-kii waxeyna booqashada Erdugan ku soo beegmeysaa xilli dhawaan Dekedda Muqdisho uu soo gaaray Markab ay soo dirtay dowladda Turkiga kaasoo siday shixnado gargaar ah oo loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee tabaaleeysan.